Shiinaha kalluunka gelatin warshad iyo alaableyda | Gelken
Sababtoo ah astaamaha shaqadiisa gaarka ah, kalluunka gelatin si ballaaran ayaa loogu isticmaali karaa wakiilka jilicsanaanta, xasiliyaha, emulsifier, dhumuc weyn, wakiilka xumbada, koollada iyo caddeynta wakiilka cuntada, daawada, sawir qaadista iyo warshadaha qurxinta.
100% alaab dabiici ah, amaan ah oo caafimaad leh isticmaal badan.
Is Waa jaalle khafiifa illaa caddaan, daahfuran oo dhalaalaya, walxo aan nadiif ahayn.
Is Waa wax soosaarka haleelka leh ee kolajka. Waa borotiin sare oo aan dufan lahayn, oo aan lahayn kolestarool. Waa xabag heer sare ah oo nafaqeysan oo xayeysiin iyo isku dhuujin cunto.
Protein Barootiinka Gelatin wuxuu hodan ku yahay 18 amino acids, 7 waa lagama maarmaan amino acids. Waxyaabaha ay ku jiraan biyaha iyo cusbada aan dabiici ahayn waa in ka yar 14%, halka borotiinka uu ka badan yahay 86%.
● Ku milmi kara biyo kulul, oo aan lagu baabi'in karin biyo qabow, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u ballaarin karaa una jilcin karaa isagoo dhuuqaya biyaha. Gelatin wuxuu nuugi karaa biyo u dhigma 5-10 jeer miisaankiisa.
Gelatin waxaa si weyn loogu isticmaali karaa warshadaha cuntada iyo soosaarida kaabsoolka
Hore: Gelatin loogu talagalay Marshmallow
Xiga: Xalaal Gelatin